Hosoka , Fandrahonana ary Famoretana : Tsy Hita Tabilao ny Fifidianana ao Repoblika Demaokratikan’i Congo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Marsa 2018 4:48 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, English, English, Français
Diabe milamina ao RDC via Congo réformes CC- BY-20
Raha miezaka ny hikiry eo amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny hery ny fitondrana roa taona izao, miezaka ny hanaisotra ny firenena amin'ny krizy kosa ny fanoherana sy ny firaisamonina iraisampirenena, amin'ny fanerena ny fioha Kabila hanaiky hikarakara ny fifidiannaa filohampirenena.
Hiharatsy ve ny toe-draharaha ao RDC ? Izany no ahian'ny mpamakafaka maro rehefa tsy mety manaiky hiala amin'ny fitondrana i Joseph Kabila. Fitarazohana ara-politika ampangain'ny mpanohitra misedra rivotra, mihamavitrika, araka ny asehon'ny diabe notontosaina tamin'ny 25 febroary lasa teo, notarihan'ny Comité laïc de coordination (CLC) na ny Komitim-Pandrindrana Lahika nanerana ny araben'i Kinshasa. Notohanan'i Moïse Katumbi manao sesintany ny tenany any Bruxelles izany diabe izany, ary niantsoany ny Kôngôley “mandala ny rariny sy ny fandriampahalemana” hanatevin-daharana izany hetsika izany.
Nisy diabe milamina sy niarahan'ireo antokom-pivavahana maro tratran'ny famoretana henjana indray avy eo : olona telo no voatifitry ny mpitandro ny filaminana. Zaza manavava iray no ahiana ny ainy noho ny nifohany etona mandatsa-dranomaso. Akanjo mainty no nanaovan'ny vehivavy tamin'ny 8 Marsa ho “fanajana ireo maritioran'ny demaokrasia, nazeran'ny balan'ny polisin'i Kabila”.
Fitondrana mandany fotoana
Mampitombo hatrany ny fihetsikesehana ny mpanohitra. Nilaza ny mpitondrateniny, Lambert Mende, fa efa akaiky ny fanendrena ny kandidàn'ny maro an'isa amin'ny jolay 2018. Nefa tsy tena mazava izay nolazain'ny teo amin'ny fitondrana. Niverina tamin'ny teniny teo aloha i Lambert Mende tamin'ny fiandohan'ny febroary ary nanazava tamin'ny mpanao gazety iray :
Tsy nilaza aho hoe hanondro izay handimby azy ny filoha Kabila. Nilaza kosa aho fa araka ny tetiandrom-pifidianana dia ho fantatsika ireo kandidà isan-karazany amin'ny volana jolay
Raha niverimberenana nanontaniana isaky ny manao fivoahana ofisialy ny filoha Joseph Kabila, dia tsy nety namaly mihitsy ny fanontaniana amin'izay mety hirotsahany ho kandidà ary toa tiany mihitsy aza ny mitazona ny tsiambaratelo.
Nandritra ny fotoana iray hafahafa sy maneho zavatra iray izay aza ny filoha dia nametraka ny fanondrony tamin'ny molony rehefa nanontanian'ny mpanao gazetin'ny RFI tamin'io raharaha io. Toa mampihevitra izy fa milalao ora ny filoha, ary manangona ireo mpiara-dalana aminy.
Saingy mamela azy tsikelikely ireo mpanohana iraisampirenena ary mihamafy ny tsindry. Miantso ny hampiatoana ny fiaraha-miasa amin'ny manampahefanan'ny firenena ny ONG (FTMF) maro, miantso an'i Frantsa sy ireo firenen-kafa. Vao haingana izay no nanapaka ny fifandraisan'ny i Congo aminy i Belzika, izay mifandray ara-tantara amin'i RDC sy i Congo. Nandrotsa-bato ny Parlemanta eoropeana, tamin'ny tapaky ny volana janoary, hitaky amin'i Kabila ny fikarakarana fifidianana demaokratika ary nisy fikambanana maro, notohanan'ny Parlemanta Eoropeana, nametraka fanangonan-tsonia mangataka amin'ny Fitsarana Adiheloka Bevava Iraisampirenena hanokatra famotorana noho ny herisetra nataon'ny fitondrana tao amin'ny faritr'i Kasaï.
Vato elekitrônika, ahiana ho fangalaram-bato
Vao haingana ny ambasadaoro amerikana ao Kinshasa no nilaza ny fanahiany hahita ny fifidianana, raha ho tontosa ihany, hisy fangalaram-bato amin'ny alalan'ny fampiasana milina fandrotsaham-bato elekitrônika. Hoy ilay diplaomaty nanazava hoe:
Mety hampidi-doza ny fampiasana ireny teknolojia vaovao ireny amin'ny fifidianana iankinan'ny ain-dehibe tahaka itony.
Maro amin'ireo mpandinika tokoa no miahiahy fa hotarihan'ny fitondrana araka izay itiavany azy ny fifidianana. Nanambara i Jean-Pierre Lacroix, lehiben'ny hetsika fitandroana ny filaminana ao amin'ny Firenena Mikambana :
Tsy maintsy mandray fepetra ny governemanta hanokafana seha-pifanakalozan-kevitra politika sy manangana tontolo ahafahana manatontosa fifisianana azo inoana, malalaka, marina ary mangarahara
Tamin'ny Topimaso fanaony isantaona momba ny heloka an-tserasera ny CLUSIF no niampanga fiakaran'isan'ny fanaovana hosoka sy fisovohana ara-pifidianana manerana izao tontolo izao tamin'ny taona 2017. Nampitandremany ireo andrim-panjakana iraisampirenena amin'ny tsy maintsy hampivoarana ireo seha-panaraha-maso antonona sy sahaza amin'izay mety ho fandrotsaham-bato elekitrônika.
Ahiana mafy tokoa ny mety hibolisaran'ny fifidianana. Indrindra moa fa efa zatra amin'ny fanao tahaka izao ny fitondrana. Lasibatra tamin'izany ireo ONG (FTMF) miisa valo ao Haut-Katanga. Ampangainy ho miray tsikombakomba amin'ny eo amin'ny fitondrana ireo orinasam-pifandraisandavitra ka manapatapaka hatrany ny aterineto « noho ny antony ara-politika ». Nosakanana ohatra ny fidirana aterineto sy SMS tamin'ny 20 janoary lasa teo, andro iray alohan'ny fihetsiketsehana anti-Kabila iray nokarakarain'ny Komitim-Pandrindrana Lahika (CLC).
Tsindry atao amin'i Moïse Katumbi
Ankoatra ireo famoretana ny fihetsiketsehana, izay matetika arahin'herisetra, tahaka ireo mpanohitra miisa enina matin'ny tifitry ny polisy tao Kinshasa tamin'ny 21 janoary lasa teo, dia manafika hatrany ireo mpitarika ny mpanohitra ny eo amin'ny fitondrana, ary lasibatra lohalaharana amin'izany i Moïse Katumbi.
Voatery nanao sesitany ny tenany tany Eoropa izy rehefa naratran'ny herisetran'ny polisy nandritra ny fitsarana politika iray, nomelohina higadra 36 volana izy avy eo ary voasazy ho tsy azo fidiana noho ny raharaham-pangalaram-pananana mifaka iray (trano na tany) izay heverina fa misy fanaovana lasibatra manokana.
Fananjehana ara-pitsarana nobaikoan'ny filoha mihitsy, araka ny mpitsara Ramazani Wazuri. Nanamafy ihany koa ilay vehivavy mpitsara nanonona ny fanamelohana fa norahonana ara-batana sy ara-tsaina izy. Iza no nanao izany ? Ny solontenan'ny fitondrana, indrindra fa i Kalev Mutond, ilay lehiben'ny sampam-pitsikilovana. Manao sesitany ny tenany any Eoropa amin'izao fotoana izao io vehivavy mpitsara io ary eo ambany fiarovan'ny FIDH.
Tiam-bahoaka sady kandidà notendren'ny vondron'antoko mpanohitra miisa fito, mitana ny lohalaharana eo amin'ny fitsapan-kevitra i Katumbi. Miezaka ny manao tsindry iraisampirenena an'i Kabila avy ao Londres, Paris ary Bruxelles amin'izao fotoana izao ity governoran'i Katanga teo aloha ity.
Hiankinan'ny ain-dehibe ireo volana ho avy ireo. Hanaja ny tetiandrom-pifidianana napetraka ve i Kabila ? Hapetraka araka ny tokony ho izy ve ny fikarakarana fifidianana demaokratika marina ? Ho afa-mirotsaka tsy misy ahiahy amin'ny fifidianana ve i Katumbi ? Fanontaniana ireo izay hamaritra ny hoavin'i RDC amin'ny taona maro hoavy ny valiny.